बुद्ध एयरको जहाजमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कोमल पनि थिए? पाइलट शेर्पासँगको सामाजिक संजालमा जता ततै भाइरल 1 min read – Dainik Sangalo
बुद्ध एयरको जहाजमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कोमल पनि थिए? पाइलट शेर्पासँगको सामाजिक संजालमा जता ततै भाइरल 1 min read
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन १२, २०७८ समय: १०:४३:०२
जहाजबाट ओर्लिएका क्याप्टेन शेर्पालाई अंकमाल गर्दै सबैको शुभेक्षा प्रकट गरेका छन् । शेर्पाको साहसिक, धैर्यवान र कुशल कार्यले नै ७७ जनाको सुरक्षित फर्किएका हुन् ।
तर, सोमबार साँझबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्वरानी कोमल शाह, बुद्ध एयरका क्याप्टेन आङगेलु शेर्पासहित बुद्ध एयरका कर्मचारीसहितको एउटा तस्वीर भाइरल भएको छ । के पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वरानी कोमल त्यो जहाजमा थिए ? स्वदेश नेपालले फ्याक्ट चेक गरेको छ ।
फेसबुकमै पार्वती थापाले लेखेकी छिन्, ‘साहसी क्याप्टेन आङगेलु शर्पाज्यू नमन! आज बुद्ध एयरको जहाजलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाएर ७७ जनाको ज्यान बचाउने भगवान!’ उनले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको तस्वीर पोस्ट गरेकी छिन् ।
फेसबुकमा अर्को पोस्ट छ, विशाल राजभण्डारीको । उनी लेख्छन्, ‘जहाँ राजारानी हुन्छ त्यहाँ भगवानको बास हुन्छ भन्ने सही सावित भयो । आजको बुद्ध एयरमा राजारानी पनि सवार थिए, त्यही भएर भगवान श्री पशुपतिनाथको कृपाले दुर्घटना हुनुबाट जोगियो ।’
दुई घण्टादेखि काठमाडौंको आकाशमा होल्ड भएको जहाज सकुशल अवतरण भयो । त्यसपछि सबै यात्रु गन्तव्यतिर लागे । कोही भिआइपी छन् कि भन्ने चासो थियो । किनभने दिउसोको कार्यक्रमका लागि राजनीतिक दलका नेताहरू बिहानै विराटनगर जाने गरेका छन् ।
अब कुरा गरौं भाइरल भएको तस्वीरको । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वरानी कोमलसँग क्याप्टेन शेर्पाले फोटो खिचेका रहेछन् । तर, सोमबार होइन । भाइरल भइरहेकामध्ये एक तस्वीरमा सन् २०१० अक्टुबर ११ तारिख उल्लेख छ ।
अर्को तस्वीर सन् २०१२ तिरको भन्ने बुझिएको छ । त्यस कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वरानी कोमलको उक्त तस्वीर सोमबारको नभएको पुष्टि भएको छ ।
फोटो भाइरल भएपछि स्वदेश नेपालले पूर्वराजाका सञ्चार सचिव फणिराज पाठकलाई सम्पर्क गरेको थियो । पाठकले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र काठमाडौंमै रहेको बताए । साथै ज्ञानेन्द्र उक्त जहाजमा नरहेको पनि पुष्टि गरे ।
त्यसैले सोमबार भाइरल भइरहेको तस्वीर पूरानो हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । यद्यपि, नेपालमा राजतन्त्र गए पनि ज्ञानेन्द्र पक्षधर सानो जमात अहिले पनि छ । ज्ञानेन्द्रका अनेक तस्वीर भाइरल बनाउने काम सोही समूहको हो ।
ल्याण्डिङ गियर नखुलेका कारण विमानले आकाशमा लामो समय फन्को मा’रिरह्यो । विमानमा भएको इन्धन सकेर धावनमार्गमा फम राखेर अवतरण गराउने योजना बन्यो ।
तर, जहाजलाई निकै तल ल्याएर हेर्दा ल्याण्डिङ गियर पनि खुलेको देखिएपछि विमानको सहज अवतरण सम्भव भएको विमानस्थलका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘जहाजमा ल्याण्डिङ गेयरका लागि दुई वटा इन्डिकेटर रहेको हुन्छ । जस अनुसार प्राइमेरी इन्डिकेटरमा संकेत नदेखिएको तर सेकेण्डरी इण्डिकेटरमा सबै ठिकठाक रहेको देखियो । ‘सुरक्षामा शुन्य सहनशिलता’ अनुसार क्याप्टेनले जहाज तुरुन्तै काठमाडौंमा फर्काउने निणर्य गर्‍यो’, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ।
‘काठमाडौं आकाशमा आइसकेपछि क्याप्टेनले बुद्ध एयरको टेक्निकल टिमको रेडियो सम्पर्कमा ल्याण्डिङ गियर चेकजाँच गर्दा सही र झरेको जानकारी दियो । जस अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जारी गरेको दिशा निर्देशिका अनुसार काठमाडौं विमानस्थलमा सुरक्षितसाथ जहाजलाई ‘नर्मल’ अतवरण गराइयो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौंबाट विराटनगर उडेको कल साइन नाइन एन–एएनआई, उडान संख्या यु ४ ७०१ जहाजमा वयष्क ६८ जना, बच्चा २ जना, इन्फ्याण्ट ३ जना गरि ७३ जना यात्रु रहेको बुद्ध एयरले जानकारी दिएको छ।
Last Updated on: September 28th, 2021 at 10:43 am